हेनुहोस : यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा ? - Darpanpost
» रोचक » स्वास्थ्य/जीवनशैली अंक: 40634
एजेन्सी । यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् । पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा च’म्लन्छन् ? कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्’र्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ?
एक शोधका अनुसार जसै हाच्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नि’न्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् । खासगरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्यान्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश पठाउँछ ।
यौन सम्पर्कका क्रममा द’म्पती एकअर्कावीच एकाकार भएको अनुभूत गर्छन् । उनीहरु आफुहरुवीचैका इन्टीमेसी र केमेस्ट्रीमा इन्जोए गरिरहेका हुन्छन् । यौन सम्पर्कका क्रममा उनीहरु पार्टनरलाई सहयोग र सुरक्षा महसुस गराउन चाहन्छन् ।
कोरोना परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशाला लाई सरकारबाट जारी भएको परिचय पत्र अनिवार्य हेर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने चार वटा प्रयोगशाला लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
ताप्लेजुङ प्रस्थान प्रधानमन्त्री ओली